Maitiro uye maitiro matsva e membrane bioreactor MBR-Indasitiri nhau-Shenzhen SH-MBR Technology Co, Ltd.
Maitiro uye maitiro matsva e membrane bioreactor MBR
Kubva kuma1980, membrane bioreactors akagashira kutarisisa uye kuve imwe yenzvimbo dzekutsvagisa nzvimbo. Parizvino, hunyanzvi hwave kushandiswa munyika dzinopfuura gumi senge United States, Germany, France neEjipitori, ine chikero chinobvira pa6m3 / d kusvika 13000m3 / d.
Tsvagurudzo yeChina paMBR isingasviki makore gumi, asi kufambira mberi kuri kukurumidza kwazvo. Ongororo yemumba paMBR inogona kuve yakakamurwa kuita akati wandei zvinhu:
Inofananidzwa neyechinyakare biochemical kurapwa kwemvura tekinoroji, MBR ine zvinotevera zvinotevera zvinhu:
Prev: Iwe unoziva here maitiro eMBR akasanganiswa ekugadzirisa michina?
Zvadaro: Kushanda kwemembure bioreactor muchipatara kurapwa kweseweji